तपाईंको जस्तै सोच सबैको भयो भने जातीय वि’भेदको अन्त्य हैन, जातीय ल’डाइँ सुरु हुन्छ। – Nayabook
ईन्द्र खड्का- रुपाजी ! तपाईंको निधारमा ‘कमिनी’ भनेर लेखिएको पक्कै थिएन। घरधनीले तपाईंलाई जात सोधेका थिएनन्। तपाईंजस्तो काठमाडौंमा कोठा खोज्न हामीपनी हिंडेको छौँ ।
तपाईं चौबीस बर्षकी युवतीले आफ्नो मानहानी भयो भनेर अन्ठाउन्न बर्षको तपाईंको आमा सरहको आमालाई मानहानी गरेर के तपाईंले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नुभयो? तपाईंले उहाँलाई राम्रोसँग सम्झाउन सक्नुहुन्थ्यो। के तपाईंले जातीय विभेद के हो उहाँलाई सम्झाउनु भयो? कोसिस मात्र पनि गर्नुभयो ?
तपाईंभन्दा पैंतिसौं बसन्त पहिलाको मान्छेले तपाईंलाई चाहिँ थपक्कै बुझिदिनु पर्ने ? तपाईंको जस्तै सोच सबैको भयो भने जातीय वि’भेदको अ’न्त्य हैन, जातीय ल’डाइँ सुरु हुन्छ। आफ्नो अधिकारको नाममा अरुको अपमान गर्ने हक तपाईंलाई पनि कानुनले दिएको छैन।